avril 2019 – filazantsaramada
NY RAN’I JESOSY
« Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin’ny trano izay itoeranareo; ary raha mahita rà Aho, dia handalo anareo, ka tsy hisy loza handringana anareo, raha mamely ny tany Egypta Aho. » (Eksodosy 12:13) Tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha no nisy an’io. Atentina amin’ny tolàm-baravaran’ny trano itoeran’ny olon’Andriamanitra ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema. Ankehitriny […]
Publié parfilazantsaramada avril 26, 2019 mai 3, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY RAN’I JESOSY
« Ary hianareo dia manana alahelo ankehitriny; fa hahita anareo indray Aho, dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. » Jaona 16:22 Jesosy no niantso ny mpianany ho eo Aminy, nanaraka Azy ireo na andro na alina. Izay nohanin’ny Tompo dia niarahany tamin’izy ireo, hany ka tena nisy fifamatorana teo amin’i […]
Publié parfilazantsaramada avril 24, 2019 avril 24, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FAHORIANA, FIFALIANA.
NY FANOAVANA MARINA NY TENY
« Aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. » Lioka 1:38 Anjely tonga miresaka aminao: tsy mahazatra izany ary tsy mahagaga raha natahotra i Maria. Hoy ilay anjely: aza matahotra. Fanahiana sy tahotra no mahazo antsika rehefa zavatra tsy mahazatra no mitranga. Mampitony antsika amin’izany Andriamanitra. Misy tenin’Andriamanitra tonga amintsika ve eo amin’ny toe-javatra izay tena […]
Publié parfilazantsaramada avril 12, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANOAVANA MARINA NY TENY
NY FANAHY MASINA MIADY AMIN’NY FANAHY RATSY
« Jesosy namoaka demonia moana. Ary rehefa nivoaka ny demonia, dia niteny ilay moana. » Lioka 11:14 Ny demonia dia fanahy ratsy. Mitondra aretina maro samy hafa izy, ary moana no aretina entiny eto. Mampahory antsika ny demonia (cf Mat 15:22) Noho izy mpampahory ny olona dia tsy maintsy avoaka tsy hitoetra ao anatintsika: tenin’i Jesosy mihitsy […]
Publié parfilazantsaramada avril 8, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FANAHY MASINA MIADY AMIN’NY FANAHY RATSY
NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’ANDRIAMANITRA.
« Dia nandray ny mofo Jesosy; ary rehefa nisaotra, dia nizara izany tamin’izay nipetraka hihinana Izy; ary hazandrano koa araka izay nilainy. » Jaona 6:11 Onena ny olona Jesosy. Manetry tena Izy ka maka ny toerana maha olona Azy. Na dia Andriamanitra aza Jesosy dia tsapany ny hamafin’ny hanoanana eo amintsika. Te hitsinjo antsika Izy. Misy tsy […]
Publié parfilazantsaramada avril 1, 2019 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY ZAVATRA REHETRA DIA HAIN’ANDRIAMANITRA.